समयसापेक्ष मैले जनताका केही आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सफल भएको छु: रजबहादुर शाही :: यार्सान्यूज :: समयसापेक्ष मैले जनताका केही आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सफल भएको छु: रजबहादुर शाही
समयसापेक्ष मैले जनताका केही आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सफल भएको छु: रजबहादुर शाही अबको बाँकी कार्यकालमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु ।
बिहीबार, कात्तिक २०, २०७७ यार्सान्यूज
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका सबै वडा अहिले सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।सडक, बत्ति, शिक्षा, खानेपानी र पशुपालन क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै काम गरिरहेको यो गाउँपालिकाले कर्मकाण्डी मात्रै होइन त्योभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्ने प्रयास थालेको छ। स्थानीय निर्वाचनको साढे तीन वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधि आएपछि हिमा गाउँपालिकाका जनताले महसुस गर्ने गरी के कस्ता काम भए त भन्ने विषयमा यार्सान्यूज डटकमका प्रतिनिधिले गाउँपालिकाका अध्यक्ष रजबहादुर शाहीसंग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष बित्यो । यो अवधिमा यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो ?
तीन वर्ष कटेको पत्तै भएन । जनताको सेवा र जनतासँग घुलमिल गर्दै साढे तीन वर्ष बितेको महसुस गरेको छु । पहिलाको शासन व्यवस्था, पुरानै परिपाटि र पुरानै संस्कारमा रुमल्लिएका जनतालाई नयाँ राजनीति, नयाँ शासन व्यवस्था र नयाँ संरचना अनुसार काम गराउन केही समस्या र चुनौति देखा परे । गणतन्त्र आयो तर त्यो सँगै जनतामा सोचको परिवर्तन हुन अलि अप्ठ्यारो स्थिति देखा परेको पाइयो । हामी हिजोकै संस्कारमा हुर्केको, हिजोकै संरचनामा काम गरेको र विकास निर्माणको कार्यहरु पनि हिजोकै शैलीमा गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेको हुनाले नयाँ र पुरानो बिचारबीच आज पनि अन्तरविरोध छन् । त्यो सँगै मान्छेलाई नयाँ बिचार अनुसार माथि उठाउन केही समय लाग्ने मैले महसुस गरेँ । तैपनि तीन वर्षको अवधिमा जनतासँगै बसेर जनताको सेवा गर्दै आउने क्रममा जनताको भावना समेट्ने अवसर मलाई मिल्यो । यसले हर्षित बनाएको छ र जनताले मसँग गरेको अपेक्षालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको अनुभुति मैले गरेको छु ।
ए उसो भए जनताको इच्छा, चाहना जुन थिए, ती पूरा भएको अवस्था हो ?
जनताका इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न त अझै समय लाग्ने देखिन्छ । एउटा समस्या समाधान गर्यो, अर्को समस्या देखा परिहाल्दो रैछ । खानेपानीको समस्या भएको गाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गर्यो, त्यहाँ ढल निकासको आवश्यकता देखिदोरैछ । ढल निकासको आवश्यकता पुरा गर्यो, फोहर व्यवस्थापनको आवश्यकता आउँदो रैछ । बाटो बनाएपछि पर्खाल लगाउनुपर्ने हुँदो रैछ । त्यो समस्या समाधान गर्यो फेरि नालिको समस्या हुँदोरैछ । नाली बनायो, पिच गर्नुपर्ने समस्या आउँदा रैछन् । त्यसकारण त्यस्ता समस्याहरु अहिले नै पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दैन । समय परिस्थिति अनुसार मात्रै हामीले केही आवश्यकता पुरा गर्यौं । यस अर्थमा मैले राम्रै गरि आफूले काम गरिरहेको भन्ने अनुभूति गरिरहेको हुँु । हिजो बाटो नभएको ठाउँमा अहिले बाटो पुगेको छ । हिजो खानेपानी नपुगेको गाउँमा आज खानेपानी पुगेको छ । गाउँपालिकाका हरेक वडामा बाटो पुर्याईयो । बाटो पुगेपछि अब पिच गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बर्षामा पानीले रोड बिगार्ने समस्या छ । पहिरो आउँछ । त्यो पनि संस्थागत रुपमा समस्या हल गर्नुपर्ने भएकाले जनताका समस्या एकपछि अर्को थपिदैछन् । यी समस्या पाँचबर्षमै हल गर्न सकिन्छन् भन्ने लाग्दैन । तर समयसापेक्ष मैले जनताका केही आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सफल भएको छु भन्ने लाग्छ ।
तपाईको भनाइ अनुसार जनताले सिंहदरबार गाउँमा आएको अनूभूति गरेका छन् भन्न मिल्छ त ?
जनताले त्यो अनुभूति त गरेका छन् । यस गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले पूर्ण रुपमा सुविधाभोग गर्ने गरी काम नहुन सक्छन् तर आफ्ना दुःखेसो र गुनासो बिसाउने चौतारी पाएका छन्। यो अनुसार सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति जनताले गरेका हुन् । समाजमा विभिन्न विचारका मानिसहरु छन् । एउटा गरिखाने मानिसहरुको वर्ग छ । एउटा कुरा मात्र गरेर खाने मानिसको वर्ग छ । अर्को पुरानै सोचविचार भएको यो शासन व्यवस्था केही पनि होइन भन्ने मानिसहरुको जमात छ । हामीले राम्रो काम गरेपनि त्यसको बिरोध गर्ने वर्ग पनि छ । तर अधिकांश जनता राम्रो कामको पक्षमा छन् । हिजो नागरिकता बनाउन अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, गाविस सचिवले सिफारिस गथ्र्यो । अहिले वडामा सचिव छन् । वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हामीले घरमै गएर बुझाइदिएका छौं । बैक गाउँमा स्थापना भएको छ । सर्वसाधारणले खाता खोलेका छन् । यी कुराहरु सकारात्मक हुँदाहुँदै विरोधी तप्काले केही काम भएको छैन भनेर प्रचार र व्याख्या गर्ने पनि गरेका छन् । जनताले विकासको महसुश गरेपनि विरोधीहरुले शासन व्यवस्था नै उल्टाउने गरि भ्रम छर्ने काम गरिराखेका छन् । त्यसकारण नयाँ शासन व्यवस्था रुचाउने जनताले सिंहदरबार गाउँमै आएको महशुस गरेका छन् भने केहीलाई यो मन परेको छैन ।
तपाइले साढे तीन वर्षको अवधिमा जनताको लागि सबैभन्दा राम्रा काम के के गर्नु भयो त ?
यो सान्दर्भिक प्रश्नको लागि यहाँलाई धन्यवाद । मैले चुनाव जित्दै गर्दा हाम्रो गाउँठाउँका हुनेखानेका छोराछोरीहरु अध्ययनका लागि काठमाडौं, सुर्खेत लगायत सुगम ठाउँमा पढ्थे । अहिले पनि पढिरहेका छन् । गरिव असहायहरुका छोराछोरी गाउँमै पढ्छन् । कतिपयको त गाउँमै पढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन । गरिबका छोराछोरी गाईवस्तु हेर्ने, अर्काका घरमा काम गर्ने अवस्था अहिले पनि छ । ती गरिब असहायका छोरीछोरीलाई पढाउन हामीले आवासिय विद्यालय निर्माण गरेका छौं । यो शिक्षा क्षेत्रमा मैले गरेको एउटा महत्वपूर्ण काम हो । यो आवासिय विद्यालयमा अहिले ५६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यहाँ हामीले गास,बास,कपास लगायत सबै व्यवस्था गरेका छौं । यहाँ सबै गरिब,दलित,अनाथले पढ्न पाएका छन् । टुहुरा बालबालिकालाई हामीले संरक्षण गरेका छौं । अर्को मैले गरेको महत्वपूर्ण काम उज्यालो कार्यक्रम हो । यो गाउँपालिकामा मैले बत्ति बालिदिएको छु । भर्खरै आचार्यलिहिँमा पावरहाउस बनायौँ । त्यहाँबाट बत्ति बाल्यौ । पातारखोलामा पनि बिगत १० वर्षदेखि नभएको काम अहिले हामीले सञ्चालनमा ल्याएर पोहोर सालदेखि बत्ति बाल्यौं । साढे तीन करोडको लगानिमा बुअमा हिमाखोला हाइड्रो बनाउदैछौं । यो बन्यो भने हिमा गाउँपालिको सबै ठाउँमा बत्ति पुग्छ र उज्यालो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ । अर्को मानिसलाई चाहिने थुप्रै आवश्यकता मध्ये खानेपानि र सरसफाई पनि एक हो । पहिला एक गाग्री पानी ल्याए दिनभरि पुग्थ्यो भने अहिले पुग्दैन अब त्यो समय रहेन । वर्ष बित्दै जान्छ, दिन बित्दै जान्छ । मानिसले नयाँ आवश्यकताको माग गर्न थाल्छ । त्यसकारण ‘एक घर एक धारा’ भन्ने कार्यक्रम मेरो घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो । त्यो हेर्ने हो भने जोगिबाडामा त्यो कार्य सम्पन्न भएको छ । देआरगाउँमा पनि सम्पन्न भएको छ । बुअमा पनि ५० लाख भन्दा बढिको लगानिमा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ । मच्चीकुलोमा पनि सम्पन्न भएको छ । पाथरखोलाको खलढुङ्गामा एक घर एक धारा बनाएका छौं । कतिपय ठाउँमा अब यो योजनाले मुर्तरुप लिदैंछ । अर्को महत्वपूर्ण कार्य सडक हो । गाउँपालिकाका सबै ७ वटा वडामा अहिले सडक पुर्याइएको छ । यो साढे तीन वर्षको अवधिमा ६१ कि.मी सडक निर्माण भएको छ । यो सडकलाई गुणस्तरीय सडक बनाउनु पर्ने अबको आवश्यकता हो । यसरी सडक, शिक्षा, बत्ति र खानेपानी जस्ता अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरिएको छ ।
अबको बाँकी कार्यकालमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने सोच बनाउनु भएको छ ?
अबको बाँकी कार्यकालमा शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । प्रत्येक घरधुरीको डाटा संकलन गरेका छौं । अब गाउँपालिकाको हरेक विद्यालयमा व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने लक्ष्य छ । सीपमुलुक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने र पशुपालनको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने योजना छ । हाम्रो गाउँपालिकालाई भेडापालनको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यहाँका जनताको पहिलो रोजाई भेडापालन भएकाले यो जनताको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आयश्रोत हो । त्यसर्थ भेडाबाख्रा पालन गरेर हिमा गाउँपालिकाका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने देखिएको छ । यसमा लगानी गर्ने हाम्रो सोच छ । अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकामा आधारभूत सुबिधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । त्यो कति सकिन्छ हामीले गर्ने हो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २०, २०७७ १०:४२